All vezviedza! "Muna 2017, musoro zviitiko gumi zviri nokuchengetedza indasitiri" achabuda dzichangobva - China Qingdao Hongda Metal Achigadzira
All vezviedza! "Muna 2017, musoro zviitiko gumi zviri nokuchengetedza indasitiri" achabuda dzichangobva
Pashure kupfuura mwedzi kupemha, kuvhota uye kuverengwa, ivo "TOP GUMI ZVAKAITIKA IN THE nokuchengetedza indasitiri MUNA 2017" rakazozivikanwa kubuda! Out kambani akahwina pamusoro matatu ne "October, Qingdao hongda kambani EP-4000 yemagetsi sikuruwa wokudhinda kuti vakawanda kugadzirwa", iyo ndakarumbidzwa zvinopfuura 10,000 vaverengi uye netizens.
On October 13, 2017, kuti EP-4000 yemagetsi sikuruwa wokudhinda yakataurwa Qingdao Hongda kambani muna 2016 apedza zvinyorwa, chakaratidza Hongda kambani kuti vakawanda kugadzirwa ichi mhando mishonga kuva chete mudzimba indasitiri. Saka kure, zvipfuwo musika mugove EP-4000 yemagetsi sikuruwa wokudhinda yave zvawanikwa 80%. Akaziva simba rokuponesa uye girini nokuchengetedza.
Mupiro hunoshamisa pamusoro sachigaro Qingdao Hongda Metal Achigadzira Machinery Co., Ltd kwave kuzivikanwa nokuchengetedza indasitiri uye rave paakavapa sezvo kunoshamisa munhu nokuchengetedza bhizimisi muna 2017.
Post nguva: May-18-2018